Tag: baladweyne | Sagal Radio Services
Xaalada magaalada Beledweyne ayaa saakay degan kaddib rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac oo shalay ka dhacay, kaddib markii uu iska horimaad dhaxmaray maleeshiyaad hubeysan iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Qarax qasaare geystey oo ka dhacay magaalada Beledweyne
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay bartamaha magaalada Beledweyne.
Faah faahin:Weeraro is qarxin ah iyo mid toos ah oo lagu qaaday Saldhiga Booliska Beledweyn
Sagal Radio Services • Audio/News Report • November 19, 2013
Faah faahin ayaa ka soo baxaya qaraxyo is xigay iyo weerar toos ah oo manta barqo-nimadii lagu qaaday Saldhiga Booliska Beledweyn ee bartamaha magaalada.
HALKAAN KA DHAGEYSO QARAXII KA DHACAY BALADWEYNE
Ciidanka Amaanka OO Howlgallo Dheeraad Ah Ka Wada Magaalada Beledweyn
Saraakiisha amniga ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiran ayaa sheegay in ay howlagallo kor loogu qaadayo sugidda amaanka gobolka ay ka billaabi doonaan gobolkaasi.
wararkii ugu danbeeyay Faafaahina ka soo baxaayo QARAX ISMIIDAAMIN AH OO KA DHACAY BELADWEYNE
waxaa isasoo taraayo wararka ka imaanaayo Magaalada B/weeyne ee xarunta Gobalka Hiiraan oo maanta ka dhacay Qarax dhimasha iyo dhasawac sababay kaasi oo loo adeegsaday gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay.